Wargeyska Global FirePower, ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha milatari ee waddamada caalamka. Warbixintan | Dhexnimo Media
Home Wararka Wargeyska Global FirePower, ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha milatari ee...
Wargeyska Global FirePower, ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha milatari ee waddamada caalamka. Warbixintan
Wargeyska Global FirePower, ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha milatari ee waddamada caalamka. Warbixintan waxaan ku eegeynaa farqiga awoodaha milatari ee dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya.
Inkastoo arrimo badan lagu eegayo xogta waddamada, Soomaaliya ayaa tirada ciidanka u dhiganta ama wax yar ka hooseysa Kenya.
Waxaan isbarbardhig ku sameyneynaa awoodaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ee dhinaca milatariga.
Kenya waxay kaalinta 84-aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha milatari ee waddamada, oo ka kooban 138 dal.
Tirada guud ee shacabka Keny waxay ka badan yihiin 48 milyan,
Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 19,600,998 ruux, oo u dhigma 40.5%, oo ka mid ah shacabka guud.
12,662,245 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka.
Sanad kasta tirada dadka ay da’dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiraan waa 848,370.
Tirada ciidanka milatariga Kenya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 24,150 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global FirePower. Ma jiro ciidan keyd u ah milatariga Kenya.
Awoodda Ciidanka Cirka – Kenya
Isku darka 150 diyaaradood ayey leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Kenya.
17 ka mid ah diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka.
20 waxay kala gudbiyaan saanadda milatari.
32 waa diyaaradaha tababarka.
2 waxay fuliyaan howlgallada khaaska ah.
79 waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaanno “Helicopters”.
Awoodda Ciidamada Dhulka – Kenya
Ciidammada dhulka Kenya waxay leeyihiin:
479 gawaadhida gaashaaman ah.
30 madaafiicda iskood isu haga ah.
25 madaafiicda la jiido ah.
Kenya ma laha qalabka gantaallada lagu rido.
Dhaqaalaha ku baxa dhinaca milatariga – Kenya
Miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Kenya waa $121,000,000 oo doolar.
Deynta dibadda waa $27,590,000,000.
Muhiimadda Juqraafi ahaan – Kenya
Baaxadda dhulka ee labo jibbaaran waa 580,367 km.
Dhulka xeebta ku teedsan waa 536 km.
Xuduudda ay waddamada kale la wadaagto waa 3,457 km.
Kenya ma laha marin biyoodyo la isticmaali karo.
Soomaaliya waxay kaalinta 136-aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha milatari ee waddamada, oo ka kooban 138 dal.
Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global FirePower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waa 11,258,029.
Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 2,702,167 ruux, oo u dhigma 24.0%, oo ka mid ah shacabka guud.
1,621,300 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka.
Sanad kasta tirada dadka ay da’dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiraan waa 121,598 qof.
Tirada ciidanka milatariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 20,000 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global FirePower. Ma jiro ciidan keyd u ah milatariga Soomaaliya.
Awoodda Ciidanka Cirka – Soomaaliya
Soomaaliya xilligan ma laha awood dhinaca ciidanka cirka ah, sida uu xogtiisa kusoo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodda milatari ee wadamada caalamka.
Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona.
Awoodda Ciidamada Dhulka – Soomaaliya
Soomaaliya waxay leedahay
100 gawaadhida gaashaaman.
Soomaaliya ma laha madaafiicda iskood isu haga ah.
30 madaafiicda la jiido ah.
10 qalabka lagu rikabo gantaallada.
Awoodda Ciidamada Badda – Soomaaliya
Soomaaliya ma laha Maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya, maraakiibta dagaalka ka yar kuwa wax burbirya, kuwa biyaha hoostooda mukhuurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliba maraakiibta miinooyinka baadha.
Waxa soo saarka Saliidda – Soomaaliya
Ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya.
Saliidda la isticmaalo waa 6,200 bbl.
Ma jirto saliid keyd ah oo la xaqiijiyay.
Dhaqaalaha ku baxa dhinaca milatariga – Soomaaliya
Miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Soomaaliya waa $62,200,000 oo doolar.
Deynta dibadda waa $5,300,000,000.
Muhiimadda Juqraafi ahaan – Soomaaliya
Baaxadda dhulka ee labo jibbaaran waa 637,657 km.
Dhulka xeebta ku teedsan waa 3,025 km.
Xuduudda ay waddamada kale la wadaagto waa 2,385 km.
Soomaaliya ma laha marin biyoodyo la isticmaali karo.
Itoobiya waxay kaalinta 60-aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha milatari ee waddamada, oo ka kooban 138 dal.
Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global FirePower, tirada shacabka Itoobiya qiyaas ahaan waa 108,386,391.
Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 41,143,474 ruux, oo u dhigma 38.0%, oo ka mid ah shacabka guud.
25,508,954 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka.
Sanad kasta tirada dadka ay da’dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiraan waa 1,989,698 qof.
Tirada ciidanka milatariga Itoobiya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 162,000 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global FirePower. Ma jiro ciidan keyd u ah milatariga Itoobiya.
Awoodda Ciidanka Cirka – Itoobiya
Awoodda ciidanka cirka ee Itoobiya waa 86.
Itoobiya waxay leedahay:
24 diyaaradaha dagaalka ah.
9 saanadda kala gudbiya.
20 loogu talagalay tababarka.
33 diyaaradaha qumaatiga u kaca ah.
8 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarrada fuliya ah.
Itoobiya ma laha diyaarado loogu talagalay howlgallada khaaska ah.
Awoodda Ciidamada Dhulka – Itoobiya
114 gawaadhida gaashaaman.
67 madaafiicda iskood isku haga.
650 madaafiicda la jiido ah.
183 qalabka lagu rido gantaallada ah.
Awoodda Ciidamada Badda – Itoobiya
Itoobiya ma laha awood dhinaca ciidanka badda ah, sida uu xogtiisa kusoo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodda milatari ee wadamada caalamka.
Taasi waxay ka dhigan tahay in Itoobiya aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiib toona.
Dhaqaalaha ku baxa dhinaca milatariga – Itoobiya
Miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Itoobiya waa $350,000,000 oo doolar.
Deynta dibadda waa $26,050,000,000.
Muhiimadda Juqraafi ahaan – Itoobiya
Baaxadda dhulka ee labo jibbaaran waa 1,104,300 km.
Itoobiya ma laha dhul ku teedsan xeeb.
Xuduudda ay waddamada kale la wadaagto waa 5,925 km.
Marin biyoodyada la isticmaali karo waa 104,300 km.
Previous articleDeg Deg Madaxweyne Farmaajo oo Caawa Magacaabay Raysal Wasaare Cusub Akhriso Taariikhdiisa
Next articleJiir Lagu Magacaabo Magawa Ayaa Ku Guulaystay Bilad Dahab Ah Kadib Markii Uu Guulo Kasoo Hooyay Hawlo Miino Baadhis Ah